Maxaad samayn lahayd hadii aad telefoonka waa la ayuuna? Sidee u xaaqiijin kartaan in aad si joogto gaarka ah? Sida aad kor u lacag la'aan ah karo in waxoogaa dheeraad ah oo bannaan in aad si dhab ah u samayn karaa iyada oo aan?
Takhalusid khasnado waa jawaabta.
Tusaale ahaan, Google Chrome abuuraa khasnado ee faahfaahin ah wax kasta oo aad dhirtuba dhex browser ee aad telefoonka. Waxay qaadataa ilaa meel dheeraad ah, hoos telefoonka iyo kuwa kale oo ka heli kartaa helitaanka hawlaha dhirta haddii ay qaataan telefoonka aad Android.
Cache waa xogta soo jeeda, taas oo ay isticmaalaan qalab ay tahay in la xusuusto hawlaha la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, inta badan xogta khasnado wakhtigii waa qadar weyn aan waxtar lahayn iyo hogs oo meel bannaan oo ku saabsan qalab aad. Waxa kale oo ay hoos u dhigi karaan waayo-aragnimo ku saabsan qalabka. Sidaa awgeed, waa lagama maarmaan in si joogto ah cadda Cache. Waxaa jira khasnado lagu kaydiyaa ay barnaamijyadooda, iyo daalacashada. Waxaa intaa dheer, cookies sidoo kale qaadan xogta qaar ka mid ah.
Qaybta 1. Sida loo kala cadeeyo app khasnado on qalabka Android
App kasta oo badbaadiyay xogta qaar ka mid ah in khasnado foomka, kaas oo u ogolaanaya in ay qabtaan howl isku mid ah mar kale processing badan aan. Si kastaba ha ahaatee, dhib leh waxay u baahan tahay xogta la mid ah in mustaqbalka. Halkan waxa ku jira xoogaa tallaabooyin ah oo aad u isticmaali kartaa in ay nadiifiso khasnado ee app.
Tag goobaha ay ku qalab Android aad. Hadda, garaac Apps.
On shaashadda soo socda waxaad arki doontaa liiska ee Chine. Dooro app ee u baahan in lagu nadiifiyo khasnado. List ayaa sidoo kale muujinaysa baaxadda app ah qalabka, taas oo mar kale ay calaamad wanaagsan ee lacagta khasnado lagu kaydiyaa by app.
Marka aad doorato app, aad keentay in info App, halkaas oo aad ka arki kartaa macluumaad faahfaahsan oo ka mid ah macluumaadka ay isticmaalaan app ah. Hoos si aad u aragto macluumaadka Cache ku. Si aad xogta kaliya ka jaftaa on Clear Cache.
Waxaad heli doontaa in ay nadiifiso khasnado oo ka mid ah app walba si gaar ah. Inuu hubiyo app aan la ordaya ee asalka ah sidii aad waayi kartaa macluumaad muhiim ah.
Qaybta 2. Sida loo kala cadeeyo khasnado browser ka Android
Browser ayaa ku urursan doonaa badan oo xogta foomka khasnado. Khasnado Tani waxay u ogolaaneysaa browser in la furo goob adigoo mar kale soo bixi xogta website la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan si joogto ah u furo inta badan website-ka, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad tirtirto Cache. Browser taariikhda dukaanka khasnado, download, xogta sirta ah iwm Waxaad isticmaali kartaa habka ku xusan in ay nadiifiso khasnado browser, laakiin haddii aad rabto in lagu xakameeyo dalab browser awood badan oo xogta aad rabto in aad tirtirto, sababtoo ah ma doonayo in ay tirtirto idin korinay oona password iyo login macluumaadka.
Tag dhinaca kore ee midigta ah chrome iyo tubbada ku dhibco taagan. Haddaba tag in goobaha.
Hadda hoos u dhaqaaq category Advanced iyo dooro Privacy.
On screen soo socda, tag hoose si Tirtir xogta.
Waxaad doono fursado kala duwan oo uu ka soo xusho. Haddii aadan rabin in browser inay iska ilaawaan password badbaadiyey iyo xogta autofill, 'un-tick' iyaga.
Habkani wuxuu ku siinayaa gacanta kuwa aad u fiican ka badan xogta browser aad tirtirto badan habka kor ku xusan.
Qaybta 3. Sida loo kala cadeeyo cookies ka Android
Kukiyada u ogolaanaya website in la ogaado waxa aad ka baadi ku saabsan internetka iyo website siin karaan fursado la xiriira. Si kastaba ha ahaatee, cookies ma leeyihiin size u gaar ah oo jiidi karaan hoos xawaaraha dhirta ah. Waa in aad tirtirto cookies dhowr todobaad kasta si ay u sii khibrad dhirta ee ay ugu fiican. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka ay kuu raaci kari waayay in ay nadiifiso cookies ah.
Tag hogaanka geeska midig ee Chrome ah si ay u helaan menu. Dooro taariikhda.
Hadda sugi chrome ah si ay u muujiyaan aad tahay taariikhda dhirta ah. Xaqa hoose waxaa jira option "data dhirta cad". Tubada waxa ku.
Waxaad dooran kartaa macluumaadka aad rabto in aad tirtirto. Sida aad rabto in ay nadiifiso cookies hubiyaan, doorasho cookies hubiyaa. Hadda ka jaftaa kaliya ku cad.
Riix in ay nadiifiso Android maylka / cookies si joogto ah.
Geedi socodka bove u baahan tahay inaad qabato shaqo badan hadii aad rabto in aad maylka adag oo cad oo kala duwan iyo cookies. Waxaa laga daadiyo aad u badan oo ku saabsan telefoonka, kor ku xusan habkan waxay qaadan doontaa waqti. Sidaa awgeed, xal software saddexaad sameeya shaqo ee qasabno yar.
Qaybta 4. 1 click in ay nadiifiso Android maylka / cookies si joogto ah
MobileGo horumarsan Wondershare oo bixiya dhamaystiran feature utility mobile. All inaad samayso waa rakibi app MobileGo ku qalab Android iyo ogalaan in aad qabatid shaqada aad u.
Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa software in la banneeyo ee kooxdan maylka / cookies
Shuruudaha: Ku rakib MobileGo:
Fur software ku saabsan waxaad qalab. Waxay ku tusi doonaa macluumaad kaydinta. Just ka jaftaa on Coobbi Phone.
Waxaa si toos ah uu baaritaanku u khasnado ah, files qashinka, cookies, iyo qaar badan oo. Sidoo kale waxay muujinaysaa cadadka meel ay noqon doontaa lacag la'aan ah ka dib markii nadiifinta. Hadda ka jaftaa kaliya nadiif ah.
Ka dib markii in habka xaqiijin ah lagu soo bandhigi doonaa oo muujinaya khasnado ayaa la waayay.
Waxaad isticmaali kartaa si joogto ah u isticmaalaan sida laba-saddex maalmood in ay nadiifiso Cache. Geedi socodka waa mid fudud iyo qaataa dhowr ilbidhiqsi si aad u nadiifiso telefoonka. Hadda, nadiifinta khasnado phone waa arrin sahlan sida ay u helo!
> Resource > Clean-up > Sidee ayaad u Clear Cache ku Android Qalabka?